iOS na gam akporo App Icon Photoshop ndebiri | Martech Zone
Ọ dịghị mkpa otu o si dị mfe ma ọ bụ sie ike, ọ dị ka n'oge a ị nwere ike ịchọ ụgbụ ahụ ma chọta ihe ọ bụla iji nyere aka rụpụta ọrụ gị. Anyị na-emepe ngwa ngwa ọdịnala maka ndị ahịa ma ọ chọrọ ka anyị chepụta ma wepụ faịlụ akara ngosi dị mkpa iji bulite na ngwa na iOS na gam akporo.
Na-ekele, mmebe Ọ bụ Michael Flarup ewepụtala oge iji wuo iOS 6 App Icon, iOS 7 App Icon, na Android Launcher Photoshop ndebiri na ihe eji eme ihe. Nke kachasị mma, ọ wepụtara ndebiri na saịtị ya Mpempe Akwụkwọ Icon App maka nbudata.
Jide n'aka na iziga Michael onyinye maka ịrụsi ọrụ ike ya… anyị mere! Ọ bụ ya ịrịba ọrụ na-azọpụta ndị bara uru oge anyị imewe oge.
Tags: android launcher ngwa akara ngosi Photoshop templateiconakara ngosi akara ngosiiOS 6 ngwa akara ngosi Photoshop ndebiriios 6 mobile ngwaiOS 7 ngwa akara ngosi Photoshop ndebiriios 7 mobile ngwaPhotoshop akara ngosi akara ngosi
Ndị Ọrụ Ahịa na-elekọta Ndị Ahịa